RW Cabdiweli sheikh oo u rajeeyey Puntland inay ka dhacdo doorashado madaxtinimo oo lagu qanco – Radio Daljir
RW Cabdiweli sheikh oo u rajeeyey Puntland inay ka dhacdo doorashado madaxtinimo oo lagu qanco
Janaayo 5, 2014 2:27 b 0
Garoowe, January 5, 2014 – Ra?isal wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Dr. Cabdiweli sheikh Axmed Maxamed ?ayaa maanta hanbalyo u diray gudoomiyaha baarlamanka Puntland Siciid Xasan shire oo ku soo baxay doorashadii shalay ka dhacday Garoowe.
Dr. Cabdiweli Sheikh Axmed Maxamed wuxuu sheegay inuu si dhow ula socday doorashada Puntland, gaar ahaan tii shalay lagu doortay gudoonka baarlamanka, wuxuu ku tilmaamay inay lahayd hanaan suuban.
War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra?isal wasaaraha ayaa lagu sheegay in doorashadii shalay ee Puntland ay u dhacday sifo leh horumarka dhinaca siyaasada ah ee ay Soomaaliya u baahan tahay.
Ra?isal wasaaraha Soomaaliya Dr. Cabdiweli Sheikh Axmed ayaa ugu dambayntii u rajeeyey Puntland inay ka dhacdo doorasho xalaal ah arbacada, taas oo u diyaarsan hab dimuqraadi ah oo lagu wada qanacsan yahay.
Baydhabo oo lagu taageeray baaqii madaxweynaha ee dhismaha maamul saddex gobol ah (dhegeyso)
Shirkadaha ganacsiga gobolka Gedo qaar oo raashin u qaybiyey bukaanada cisbitalka Beled-xaawo